Marquis Broadcasting သည် Fotonflite ၏လုံခြုံသောလွှဲပြောင်းမှုစနစ်ကိုစတင်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Marquis အသံလွှင့်မိတ်ဆက် Fotonflite လုံခြုံလွှဲပြောင်းစနစ်
ပွား, archive ကို, မိတ္တူ, ဝေစုများနှင့်ထပ်တူပြုခြင်းဖြစ်စဉ်များအဘို့အ point-to-point လုံခြုံတဲ့ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းကို
တစ်က high-performance ကို, 'On-the-fly' 'လုံခြုံ, Point-to-point လွှဲပြောင်းစနစ်က - Marquis အသံလွှင့် Fotonflite ™စတင်ပေးခဲ့ပါတယ် လွန်စွာလိုလားသော မီဒီယာ Composer စီမံကိန်းများနှင့်မီဒီယာထားတဲ့ workspace တွေကို။ ဒါဟာဖိုင်တွေအရင်းအမြစ်အကြားပြောင်းရွှေ့ခံရဖို့ခွင့်ပြု လွန်စွာလိုလားသော ISIS အဖွဲ့ / NEXIS စနစ်များနှင့်ပစ်မှတ်သိုလှောင်မှုအမျိုးအစားများအကွာအဝေးအပါအဝင် လွန်စွာလိုလားသော, ယေဘုယျနှင့်စီးပွားဖြစ်သိုလှောင်မှု။ Fotonflite ™တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်နဲ့လုံလုံခြုံခြုံတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှတွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်မှ၎င်း၏စွမ်းရည်အတွက်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါသည် လွန်စွာလိုလားသော ISIS အဖွဲ့ / NEXIS စနစ်များ, အထူးသဖြင့်အတူ လွန်စွာလိုလားသော In-တိုးတက်မှု-အလုပ်လုပ်နှင့်ဥပမာအားဖြင့်, အင်တာနက်ကိုကျော်ထုတ်လုပ်မှုစင်တာများချိတ်ဆက်မှုအတွက်စံပြဖြစ်ပါသည်, Pinewood နှင့် ဟောလိဝုဒ်.
Fotonflite ™အားလုံးနေသော Marquis Workspace ကို Sync ကို, Workspace ကို Backup ကိုနှင့်စီမံကိန်းကားရပ်ရန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာကိရိယာများ, တစ်ခု option တစ်ခုဖြစ်သည် လွန်စွာလိုလားသော-certified ။ Fotonflite ™၏စစ်ဆင်ရေးသည်ဤ application များလုံးဝပွင့်လင်းသည်။ ဒါဟာနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များကိုတုံ့ပြန်တီထွင်ခဲ့သည်: လုံလုံခြုံခြုံတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းစတူဒီယို လွန်စွာလိုလားသော အမေရိကန်နှင့်ဗြိတိန်အကြား NEXIS; နဲ့လုံလုံခြုံခြုံအဆင့်2သိုလှောင်မှုအပေါ်ဝေးလံခေါင်သီအလွတ်တန်းမီဒီယာ Composer စီမံကိန်းများကိုကာကွယ်ပေးရန်နှင့်စီမံခန့်ခွဲရန်လိုသူတစ်ဦး post ကိုအိမ်သူအိမ်သား။ သူတို့ကချိတ်ဆက်ဆာဗာများကိုပြင်ပတွင် '' ကြွင်းသောအရာမှာ '' ဒေတာများကိုလိုအပ်သောကတည်းကချင်းစီကိစ္စတွင်ခုနှစ်, တည်ဆဲလွှဲပြောင်းနည်းပညာများ, မလုံခြုံယူဆခဲ့ကြသည်။
"သမားရိုးကျလွှဲပြောင်းဖော်ထုတ်စေခြင်းငှါ လွန်စွာလိုလားသော ကွန်ယက်အရှိန်မြှင့်လွှဲပြောင်းစနစ်ကသူတို့ကိုကောက်ပါလိမ့်မယ်ရှေ့တော်၌ထိုဖိုင်များကိုမကြာခဏသူတို့ကြွင်းသောအရာမှာနေတဲ့ယာယီဖိုင်တွဲ, ကူးယူရမည်ဖြစ်သည်ကတည်းကအပိုဆောင်းလုံခြုံရေးအန္တရာယ်များမှဘဏ်ဍာ, "အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ဒါရိုက်တာပေါလုသည် Glasgow ရှင်းပြသည်။ "Fotonflite Fotonflite-enabled ပွား, archive ကို, မိတ္တူ, ဝေစုများနှင့်ထပ်တူပြုခြင်းဖြစ်စဉ်များစဉ်အတွင်းဒီတော့အဘယ်သူမျှမမှတ်မှာ In-လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုအမြဲဖွင့်မယ့် Point-to-point connection ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်ဒေတာအရင်းအမြစ်သို့မဟုတ်ပစ်မှတ်သိုလှောင်မှုစနစ်များကိုပြင်ပမှာကြွင်းသောအရာမှာဖွစျလိမျ့မညျ ။ "
တစ်ဦးမှအစဉ်အလာ, access ကို လွန်စွာလိုလားသော ကို Workstation high-performance ကို, အနိမ့်အောင်းနေချိန်, အနိမ့်မတည်မငြိမ်ဖြမ် LAN နှင့်ဒေသအလိုက်အဆိုပါအပြေးခဲ့သည်မှတဆင့် NEXIS မှပူးတွဲပါခဲ့လျှင် ISIS အဖွဲ့သို့မဟုတ် NEXIS system ကိုသာဖြစ်နိုင်သောခဲ့ လွန်စွာလိုလားသော NEXIS လိုင်းဆော့ဖ်ဝဲ, နှင့်ကွန်ယက်အကွာအဝေးကန့်သတ်နိုင်ပါသည်။ Fotonflite ပင် Intercontinental အကွာအဝေးမှာ operating, လိုအပ်လျှင်များစွာသောအသစ်ဝေးလံခေါင်သီ Workflows ဖွင့်, ပူးတွဲ Marquis applications များအဘို့ဤအခြေခံန့်အသတ်ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
Project မှကားရပ်ရန်နှင့်အတူအသုံးပြုသောအခါ, Fotonflite ™ထံမှ archive ကိုကူညီပေးနိုင်ပါသည် လွန်စွာလိုလားသော ဝေးလံခေါင်သီတည်နေရာအတွက်အဆင့်2သိုလှောင်မှုမှ On-line ကိုသိုလှောင်မှု။ ဤသည်စီမံခန့်ခွဲမှု, အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးအတွက်ငွေစုနှင့်အတူတစ်ခုတည်း archive ကို site ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့မျိုးစုံတည်နေရာနှင့်အတူကြီးမားတဲ့စက်ရုံအားဖွင့်, site ကိုပိတ် archive ကိုချပြီးအားဖြင့်ဘေးအန္တရာယ်ကနေနောက်ထပ်ကာကွယ်မှုများအတွက်ခွင့်ပြုပါတယ်။
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လွှဲပြောင်းအဖြစ်အခြားတသိုလှောင်မှုစနစ်အနေဖြင့်ထူးခြားသော ISIS အဖွဲ့ / NEXIS analytics, Fotonflite ™လွှဲပြောင်းစီမံကိန်းနှင့်မီဒီယာအပြောင်းအလဲများအသုံးပြုခြင်း။ ပထမဦးဆုံးအပြည့်အဝ Fotonflite ™လွှဲပြောင်းပြီးနောက်မည်သည့်နောက်ဆက်တွဲလွှဲပြောင်းသာစီမံကိန်းနှင့်မီဒီယာအပြောင်းအလဲများပေးပို့ပါ။ ဒါကထောက်လှမ်းရေးနောက်ဆက်တွဲနောက်ဆုံးသတင်းများသို့မဟုတ် Backup တွေကိုများ၏အမြန်နှုန်းနှင့်ထိရောက်မှုပြောင်းလဲနှင့်များစွာသောအခြေအနေတွေအတွက်အမြန်ဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှပစ်မှတ်စီမံကိန်းနှင့် / သို့မဟုတ် Workspace updates တွေကို 90% အားဖြင့်ကွန်ယက်ကို payload ပါလျော့ကျစေပါတယ်။ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဝေးလံသောဘေးဥပဒ်ကိုပြန်လည်နာလန်ထူနှင့်စီးပွားရေးဆက်လက်ဖြေရှင်းချက်စေလွှတ်သည့်အခါဒါဟာအစပိုပြီးရွေးချယ်မှုကမ်းလှမ်း လွန်စွာလိုလားသော ISIS အဖွဲ့ / NEXIS အလုပ်လုပ်-In-တိုးတက်မှုကို။
Fotonflite ™စစ်ဆင်ရေးအတွင်းလုံးဝပွင့်လင်းသည်။ သူတို့ဒေသအလိုက်သိုလှောင်အမျိုးအစားမဆိုရေးသားလိုကျသောအခါအဖြစ် Project မှကားရပ်ရန်, Workspace ကို Backup ကိုနှင့် Workspace ကို Sync ကိုအတူတူလမ်းအတွက်ပြုမူပါလိမ့်မယ်။ ဝေးလံခေါင်ဖျား site ကိုမှလွှဲပြောင်းနောက်ခံလုံးဝကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်ပြည်တွင်းတွင် installed ခဲ့ကြသည်လျှင်အဖြစ်ဝေးလံခေါင်သီသိုလှောင်မှုသည် Marquis အသုံးပြုသူရန်, ကြည့်နေသည်။ Fotonflite ™ခိုင်လုံသောထောက်ခံမှုစာချုပ်နှင့်အတူသစ်ဖောက်သည်များအတွက် option ကိုအဖြစ်တည်ဆဲ Workspace ကို Backup ကို, Workspace ကို Sync ကိုနှင့်စီမံကိန်းကားရပ်ရန်ဖောက်သည်များအတွက်အဆင့်မြှင့်အဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသည်။
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ Marquis တွင်တွေ့နိုင်ပါသည် Fotonflite whitepaper, ဒါမှမဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာ tools များ၏ Marquis အသံလွှင့်ရဲ့အကွာအဝေးအကြောင်းကိုနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်အဘို့, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.marquisbroadcast.com.
အဆင့်မြင့်အိုင်ပီလုပ်ငန်းအသွားအလာ လွန်စွာလိုလားသော အသံလွှင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ Fotonflite Marquis အသံလွှင့် မီဒီယာ SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် virtual reality 2018-07-31
ယခင်: NMF မြောက်အမေရိကခုနှစ်တွင် Colorfront အရောင်းမောင်းဖို့က Javier Mendez ငှားရမ်းနေ
နောက်တစ်ခု: AVIWEST ​​နယူးအရောင်းနှင့်မြောက်အမေရိကအတွက်ပံ့ပိုးမှုရုံးနှင့်အတူကြီးထွားတုံ့ပြန်သည်